ကိုရီးယားဆိုတာကလည်း ရုပ်ရှင်ထဲကလို နူးနူးညံ့ညံ့လေးလဲဟုတ်ဖူး | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ကိုရီးယားဆိုတာကလည်း ရုပ်ရှင်ထဲကလို နူးနူးညံ့ညံ့လေးလဲဟုတ်ဖူး	26
ကိုရီးယားဆိုတာကလည်း ရုပ်ရှင်ထဲကလို နူးနူးညံ့ညံ့လေးလဲဟုတ်ဖူး
Posted by Davit on Jun 21, 2012 in Copy/Paste | 26 comments
Yangon Media Group ကနေရတဲ့ သတင်းလေးပါ…….
ယုဇနဟိုတယ်တွင် ကိုရီးယားအမျိုးသားက အမျိုးသမီးကို သတ်မှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်၊ ယုဇနဟိုတယ်တွင် တည်းခိုနေသော ကိုရီးယားလင်မယားမှ
အမျိုးသားဖြစ်သူက အမျိုးသမီးအား အိပ် နေရင်းဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှု ဇွန်
၂၀(ယနေ့) နံနက် ၃နာရီခွဲက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယုဇနဟိုတယ် အခန်း ၈၀၅ တွင် ဧည့်ဗီဇာဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိသည့်
တောင်ကိုရီးယား လူမျိုးများဖြစ်သည့် မစ္စတာကင်ညောင်တိတ်(၅၈နှစ်)က
မိမိအမျိုးသမီးဖြစ်သူ မစ္စစ်ကင်ဘွန်နန်အား အိပ်နေရင်း အကြောင်းမဲ့
ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ မစ္စတာကင်ညောင်တိတ်အား ယခုအခါ ဗဟန်းရဲစခန်းတွင်
ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ သံအရာရှိများကို
အကြောင်းကြားထားပြီး မကြာမီအမှုဖွင့်အရေးယူသွားရန်စီစဉ်လျက်ရှိ ကြောင်း
မစ္စတာကင်ညောင်တိတ်သည်သေဆုံးသူအား ဓားဖြင့်ထိုး သတ်အပြီးတွင် ဗိုက်ခွဲကာ
အူများကို ဆွဲထုတ်ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
သောင်းထွန်းReporter:Yangon Media Group
ကြောက်တောင်လာပီ……အူပါဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ကား……………….. About Davit
Davit. Chelsea has written 19 post in this blog.
အပျော်တမ်း Show မှာဆိုရင် Drum တီးတယ်၊ One Men မှာဆိုရင် ကီးဘုတ်တီးတယ်၊ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းပျင်းရင် Guitar တီးတယ်။ တီးလို့ရတာအကုန်တီးသဗျို့....နားထောင်ကောင်း၊ မကောင်းတော့ နားထောင်တဲ့သူသမိုင်း၊ တီးတာကတော့ ကိုယ့်သမိုင်း....ဟေ.....ဟေ့.....မမိုက်လား..... (တစ်ကယ်တော့ ဟုတ်တိပါတ်တိ ဘာမှရဘူးရယ်) :P
View all posts by Davit →	Blog
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဘုရား..ဘုရား..
myanmarcitizen says: ဟိုက်… ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပါလား။
သူမိန်းမ ဘာကိုဖွတ်ထားလဲမှမသိတာ။ ရှာတာမရတော့တဲ့အဆုံး ဗိုက်ထဲမှာရှိမယ်လို့ယူဆလို့နဲ့တူတယ်။ :-)
မောင်ပေ says: ပုံပြင်ထဲကလိုမျိုး
တစ်နေ့ရွှေဥတစ်လုံး ဥပေးတဲ့ မိန်းမဖြစ်ခဲ့ရင်
ပေစိ says: သတင်းအမှန်က သူ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေ မနက်ပိုင်းအီအီးပါရင်း စွန့်လွှတ်တော့မယ်ပြောလို့တဲ့ အီအီးမပါနိုင်အောင် ဗိုက်ခွဲပြီး အူထုတ်ထားတာ ဗြဲ
ဆူး says: စိတ်ရောဂါ ရှိတဲ့ လူနဲ့ တူတယ်။
အူတွေ ဆွဲ ထုတ် ထားတယ် ဆိုတော့ တမျိုးကြီးပဲ။
hein latt says: မိန်းမတွေ အူတိုမတို လေ့လာတာထင်ပ…..ဒီလူကြည်.ရတာ လက်တွေ.သမားနဲ.တူတယ်…..။
pan pan says: ဆေးကြောင်တာများလား
ဒိုးစနစ် says: တိန်..
တခုခု ချည်ဖို့ကြိုးမရှိလို့ ထင်တယ်။
etone says: ဘယ်လိုများဖြစ်ရပြန်တာလဲနော် …. ။ မြန်မာနိုင်ငံက ရဲတွေကို အလုပ်လာပေးနေတယ် …. ။ သူများ နိုင်ငံလာပြီး တစ်ကုတင်တည်း အတူအိပ် ၊ အိပ်မောကျမှ လူသတ် ၊ အူစွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ …. ဘုရား ဘုရား … ဆားပုလင်း နှင်းမောင် တကယ်ရှိတယ်လို့များ ………. ထင်နေလေရော့လား … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 269
ငပွကြီး says: ဘာတွေများဒီလောက် နာကြည်းချက်ပြင်းနေပါလိမ့် …
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2347
ko khin kha says: သတင်းထူးဘဲဗျာ။ ဟိုတယ်တော့နေရင်းထိုင်ရင်း အကုသိုလ်ဝင်တာဘဲ၊
မွန်မွန် says: ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့တာထက် ဆိုးသွားပြီ။ ဘယ်ကတည်းက အငြှိုးနဲ့များ လုပ်ရက်လေသလဲ…
manawphyulay says: အကြောင်းမဲ့တော့ မသတ်လောက်ပါဘူး။ တစ်ခုခုတော့ ရှိမှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် ဒီလူက စိတ်ကော မှန်ရဲ့လား။ တချို့ကျတော့ အိပ်မက်မက်ရင်း ယောင်တာရှိသေးတယ်လေ… စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ စစ်ရမယ်ထင်တယ်နော်။ တော်တော်မလွယ်တဲ့အမှုပဲ။
cum min says: aww i’m afraid. အတော်ရက်စက်ကျတာပဲ့နော့….
သမီး ကြီး says: ဟိုတယ် အတွက်တော့ သွားပါပီ….မြန်မာပြည်ကို လာပီး..အလုပ်ရူပ်အောင် လာလုပ်နေပြန်ပီ……
water-melon says: ဒီလူကြီးနှယ် စားပြီးနားမလည်
အူမကြီးကင်များ စားချင်လို့လား မသိ
Thel Nu Aye says: ဘုရားဘုရား။ ကြောင်သွားတာထင်တယ်နော်။ ကြောက်စရာကြီး။ အူပါဆွဲထုပ်တာဆိုတော့ပုံမှန်တော့မဟုတ်လောက်ဘူး။ အပများမှီတာလားမသိ။ အောင်မယ်လေး။
hein htet says: ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ..ကိုရီးယားတွေကို ဒရမ်မာတွေထဲကလို တော့ မထင်ကြပါနဲ့ ..လွန်ခဲ့ တဲ့ တစ်လလောက်က ဆိုးလ်မှာ.. ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကို လူကြီးတစ်ယောက်က မုဒိန်းကျင့်ပြီးသတ်ဖို့ လုပ်ပါတယ်..ကောင်မလေးက ဖုန်းဆက်ပြီးရဲ ကို ခေါ်တယ်…နေရာ ကိုမသိလို့ ရှာဖို့ ပြောတယ်.. အဲဒါကို ရဲ ကသောက်ဂရု မစိုက်ဘူးဗျား(နေရာမသိလို ဒဲ့ ).. ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို အဲ မုဒိန်းကောင်က မုဒိန်းကျင့်တယ်..ကောင်မလေးက ဖုန်းကို တမင်ဖွင့်ထားတယ်(မုဒိန်းကောင်မသိအောင်) .ရဲ က လည်း အသံတွေကြားနေရတာ..အဲ ဒါကို ရဲ က ဘဲနားမှာလည်းဆိုတာလိုက်မရှာဘူးဗျား.. အဲကောင်မလေး မုဒိန်းကျင့်ခံရပြီးတကယ်သေသွားပါတယ်.. ခု ရဲ ချုပ်လည်း ပြုတ်ပါပြီ..မယုံရင် ခင်ဗျားတို့ ကို ၇ီးယားက ဘော်ဒါတွေရှီရင် မေးကြည့်တော်မူကြ..ကိုရီးယားဆိုတာ သိပ်လည်း မနူးညံ့ကြပါဘူးဗျာ.. မြန်မာတွေထက်ဆိုးပါတယ်.(ခုတော့မဟုတ်လောက်တော့ဘူးထင်တယ်..မြန်မာ က လည်း လူကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်သတ်တာတို့ ဘာတို့ ကြားနေရပြီကိုး)
ရွာစားကျော် says: ဘုရား ဘုရား အိုးပါးရယ် ရက်စက်ပါပေ့ဗျာ..
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: လူရှိန်အောင်သဂျီးလေသံနဲ့ ဝင်ဟောက်အုန်းမှ ကွိကွိ
အဲ့သည်လူ လေးငါးဆယ်ရောက်ကို ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ ပေါ်ပြူလေးရှင်းနဲ့ အချိုးချလိုက်ရင်
ကိုရီးယား ( တောင် ) တွေ သူတို့တိုင်းပြည် ဘလိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ဂျဒါ ပြောဘာဘား ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုသာ လိုက်စောက်ပြောဒမ်းဆို ရွှေတိဂုံ ဘုရားမုသ်ဝမှာ ဖိနပ်ခိုး အကြံဖန်လုပ်တဲ့
လူစုကြောင့် မြန်မာဒဗျီလုံး ဖနပ်သူခိုးဖြစ်ဂုန်မှာပေါ့
အုန်းနှောက်ကို အုန်းနှောက်လို မထားဘာနဲ့ အလုပ်ပေးဂျဘာ
ဒဂဒဲတော် ပြော ပြောခြင်ဘူး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 729
Mon Kit says: ”OH MY GOD”
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 133
sugar sugar says: အင်း ဒီမှာ လာပြီး ရှုပ်ပြန်ပြီ နော် ကိုယ့်အိမ်ရောက်မှ ကိုယ့်ကို ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး ၊ဘယ်လိုဟာတွေပါလိမ့်၊
ဇာတ်ကား ထဲမှာ တော့ ကျောပိုးပြီးတောင် ချစ်ပြလိုက်ကြတာ ၊တော်ပြီ သွားတော့ဘူး ကိုရီးယား.
cobra says: အားလားးးလားးး
ရဲစည် says: အိုကြားရတာ နားဝမျာ မသက်သာ…
ဒါနဲ့ အားကျူးရှိက ၅၈နှစ်တဲ့
သားဦး၊မြေးဦး says: ကြားရသမျှ တွေထဲ စိတ်မကောင်းစရာတိုးပြန်ပေါ့။
Comments By Postမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - TNA - ကြက်အူလှည့်သန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - ကြည်ဆောင်း - အလင်း ဆက်Comment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - may july - Ma Ma``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ခင် ခ - weiwei“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - kyeemite - kaiလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - weiweiသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - kaiဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - awra-cho - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - kai - kaiရွာသူ/သားများ အတွက် - awra-cho - Munetezမကြာမီအချိန်အတွင်း ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်းကြောင်းထဲ၌ ဂြိုဟ်တုများ လောင်စာဖြည့်တင်းနိုင်တော့မည်လော - မင်းမင်းပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောဂါကို ကုသနိုင်မည့် နာနိုဆေးပညာ - မင်းမင်း - Ma Maရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - weiwei - ရွှေတိုက်စိုးအတု - Munetez - မောင် ပေ``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - Ma Ma - padonmarအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - Ma Ma - အရီးခင်လတ်နားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Munetez - Munetezမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Ma Ma - အရီးခင်လတ်အဟံ ပထမံ - padonmar - natureမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - padonmar - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etone၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities